Taageerayaasha Man United oo codeeyey xiddigaha ay doonayaan in kooxda laga diro & Kuwa ay rabaan inay sii joogaan… (Sanchez, Pogba, Lukaku oo..) – Gool FM
(Manchester) 20 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xilli ciyaareedka 2018-19 ku dhammaysatay qaab niyad jab leh, waxaana ay horyaalka Premier League ku gabagabaysteen iyagoo guuldarro kula kulmay kooxda horyaalka heerka labaad u laabtay Cardiff City, markaasoo lagu ciyaarayey Old Traffrod maalintii ugu dambeysay horyaalka Ingiriiska.
Inta ugu badan Jamaahiirta Manchester United ayaa doonaya in xilli ciyaareedka soo socda kooxda isbedel weyn lagu sameeyo, iyagoo eegaya inay xagaagan la soo saxiixato xiddigo muhiim ah, taas bedelkeedana kuwo kale ka tirsan garoonka Old Traffrod, sidaas oo ay tahayna xiddigo sare oo magac leh ayaa la la xiriirinaya inay kooxda ka tagaan.
Ander Herrera iyo Antonio Valencia ayaa horaan lagu dhawaaqay inay ka tageen Manchester United, halka xiddigaha kale ee David de Gea, Paul Pogba, Alexis Sanchez iyo Romelu Lukaku uusan mustaqbalkooda kooxdu fadhin.
Shabakadda ciyaaraha ka faalloota ee Sports Mole ayaa todobaadkii la soo dhaafay waxa ay taageerayaasha Man United weydiisay inay soo codeeyaan xiddigaha ay doonayaan inay kooxda ka tagaan iyo kuwa ay rabaan inay sii joogaan oo ay ka sii mid ahaadaan shaxda Man United.
Yeelkeede, taageerayaasha Man United ayaa u rajeeyey xiddigo magacyo waa weyn leh inay isaga baxaan garoonka Old Trafford.
Sanchez ayaa hoggaaminaya xiddigaha ay Jamaahiirta Man United doonayaan inay kooxda isaga tagaan, waxaana ay codeeyeen oo ay soo jeediyeen in 95% xiddiga xulka qaranka Chile uu macallin Ole Gunnar Solskjaer iska iibiyo xagaagan.
Pogba waa ciyaaryahan kale oo sare, kaasoo aysan farxad gelin warka ka soo yeeray taageerayaasha naadiga oo u muujiyey inaysan ku faraxsanayn, marka laga reebo qaar yar oo yiri xiddiga ku guuleystay koobka Adduunka ha iska sii joogo, 29% waxa ay soo jeediyeen inuu sii joogo xiddiga xulka qaranka Faransiiska, halka 71% ay codeeyeen in la iska fasaxo 26-sano jirkaan.
Xitaa taageerayaashu waxa ay doonayaan in Lukaku uu tago, iyadoo 75% ay codeeyeen in xiddiga xulka qaranka Belgium kooxda laga diro, kaasoo la la xiriirinayo Naadiga Inter Milan ee Waddanka Talyaaniga.
Ciyaartoyda kale oo ay taageerayaashu codeeyeen in la cayriyo ayaa waxa ay kala yihiin; Phil Jones (88%), Marcos Rojo (83%), Ashley Young (84%), Matteo Darmian (85%), Chris Smalling (66%), Lee Grant (56%), Nemanja Matic (61%) iyo Eric Bailly (52%).
Jamaahiirta Man United waxa ay sidoo kale codeeyeen in kooxda lagu sii hayo oo ay sii joogaan xiddigaha ay ka mid yihiin; Victor Lindelof, Marcus Rashford, Diogo Dalot, Sergio Romero, Luke Shaw iyo Scott McTominay, inkastoo waxoogaa layaab leh ay soo baxayaan, iyadoo ku dhowaad afar meelood oo taageerayaal ah ay aaminsanyihiin in Man United ay qasab ku noqoneyso inay diidaan inuu baxo De Gea.
Fred ayey 55% taageerayaashu u codeeyeen in la sii haayo inkastoo uu xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey niyad jab ku qaatay garoonka Old Traffrod, halka Juan Mata (58%), Anthony Martial (60%), Jesse Lingard (66%) iyo Andreas Pereira (68%) ay taageerayaashu jecleysteen oo ay u codeeyeen inay sii joogaan Man Utd.
Aqriste adigu haddii aad tahay taageere Man United ah, yaad u codeyn lahayd in kooxda lagu sii hayo ama laga diro?, aragtadiisa qeybta hoose inoogu reeb.
Mbappe oo magacaabay ciyaaryahanka ku guuleysan kara abaal marinta Ballon d'Or 2019